warkii.com » DEG-DEG: Maamulka Premier League Oo Shaaciyay Wakhtiga Uu Furmayo Suuqa Xagaagu & Suuq Labaad Oo Lasoo Kordhiyay
DEG-DEG: Maamulka Premier League Oo Shaaciyay Wakhtiga Uu Furmayo Suuqa Xagaagu & Suuq Labaad Oo Lasoo Kordhiyay
Maamulka horyaalka Premier League ayaa warbixin rasmi ah kasoo saaray qorshahoosa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xagaagan xilli ay shaaciyeen maalinta uu kooxaha u furmayo suuqaasi iyo waliba maalinta uu ka xidhmi doono.
Kaddib toddobaado ay maamulka horyaalku wadahadalo la yeesheen kooxaha kala duwan ee tartanka qaybta ka ah, heshiis dhammaystiran ayaa maanta laga gaadhay dhinaca suuqa iyadoo la isku af-gartay inuu suuqu 10 usbuuc furnaado.
Warbixinta uu hadda shaaciyay maamulka PL ayaa lagu sheegay in suuqu uu furnaan doono 27-ka bishan July ilaa 5-ta bisha October iyadoo uu intaas dheer yahay suuq maxali ah oo gudaha England oo kaliya ku kooban.
Suuqa maxaliga ah ee gudaha England ayaa furmi doona 5-ta October ilaa 16-ka bishaas iyadoo aysan maalmahaas kooxaha Premier League dhexdooda waxba kala iibsan karin balse ay kooxaha heerarka hoose ganacsiyo la samayn karaan.
Warbixinta kasoo baxday PL ayaa lagu yidhi “Saamileyda Premier League waxa ay ku heshiiyeen taariikhaha suuqa xagaaga ee 2020”
“Suuqa ayaa furnaan doona 10 toddobaad kaddib dhammaadka xilli ciyaareedkan Premier League isaga oo bilaabmaya 27-ka July oo dhammaanaya 5-ta October”
“Kaddib wada tashi lala yeeshay maamulka EFL, suuq kaliya maxali ah ayaa lagu dari doonaa oo ka bilaabmaya 5-ta October isla markaana dhammaanaya 16-ka October”